Dejinta ugu dambeysa ee Vim | Laga soo bilaabo Linux
Dejinta ugu dambeysa ee Vim
Duqa magaalada Alexander | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Xaqiiqdii qof walba waa inuu ogaadaa Vim, feker ahaanteyda waa tifaftiraha qoraalka ugu fiican GNU / Linux. Markii ugu horeysay ee aan isticmaalo Vim Waxaan u arkaayey inay aad u dhib badan tahay, laakiin tan iyo markii aan maamulo server-ka gaarka ah ee booggeyga gaarka ah, waxay noqotay tifaftirehayga caadiga ah, xitaa barnaamijyada, qodobkan waxaan ku arki doonnaa sida loo dalbado qaabeynta ugu dambeysa ee Vim waxaan ugu mahadcelinayaa bakhaar aan ka helay GitHub.
Sida caadiga ah adduunka ee barnaamijka bilaashka ah, Vim Waxay leedahay awood weyn oo ku habboon qaabeynta iyo qaabeynta. Marka waxaan go aansaday inaan ka raadiyo shabakada qaabeyn u sahli doonta howsha barnaamijka waxaanan la kulmay meel lagu keydiyo GitHub waxaa abuuray Amix, inta lagu guda jiro 8 sano ayaa isticmaalay waxna ka beddelay Vim si loo helo a sababtoo ah go'an Waxaad ka heli kartaa keydka su'aashu ka taagan tahay Halkan, aan aragno sida loo rakibo.
In nidaamka rakibo waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la isticmaalo tag, haddii aadan u baran barnaamijkan waad eegi kartaa tan ku amro xaashida khiyaamada git
1 Nooca aasaasiga ah ama "Cajiib" nooca
2 Tafatir goobaha aasaasiga ah
3 Arimaha suurtogalka ah ee asalka hufan
4 Wax ka beddelka kale
Nooca aasaasiga ah ama "Cajiib" nooca
Waa suurtagal in la kala doorto laba nooc, aasaasi ah in aan rakibi doonin wax plugin ah, ama mid kale oo intaa ka sii dhammaystiran oo buuxin doona Vim tifaftire aad u awood badan.
Si loo rakibo midka aasaasiga ah, kaliya amarka soo socda:
Iyo kuwa horumarsan ama “Awesome":
git clone git: //github.com/amix/vimrc.git ~ / .vim_runtime sh ~ / .vim_runtime / rakib_awesome_vimrc.sh
El sababtoo ah nooca "Awesome"Waa sida soo socota:
dejiso waqtiga socodsiinta + = ~ / .vim_runtime isha ~ / .vim_runtime / vimrcs / basic.vim isha ~ / .vim_runtime / vimrcs / filetypes.vim source ~ / .vim_runtime / vimrcs / plugins_config.vim source ~ / .vim_runtime / vr / .vim_runtime / vimr source ~ / .vim_runtime / vimr source vim isku day isha ~ / .vim_runtime / my_configs.vim qabashada endtry
Si aan ugu darno qaabeynteena waa inaan wax ka bedelno feylka ~ / .vim_runtime / my_configs.vim.
Tafatir goobaha aasaasiga ah
Marka la rakibayo nidaamka midabka asalka ah ayaa lagu wadaa ugu sarreysa, waa suurtagal in la beddelo midabada loo adeegsado in lagu muujiyo jumlada iyadoo Vim tafatirka feylka ~ / .vim_runtime / my_configs.vim iyo ku darista khadka soo socda:
Waa in la beddelaa ugu sarreysa mid kasta oo ka mid ah 3 kale oo midab midab:
Arimaha suurtogalka ah ee asalka hufan
Waa suurtagal in marka la rakibayo qaabeynta Vim aan luminno asalka hufan ee terminalka waxaanna u aragnaa vim habka soo socda:
Si loo xaliyo dhibaatada waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro khadadka soo socda feylka ~ / .vim_runtime / my_configs.vim:
hi NonText ctermfg = 18 ctermbg = NONE cterm = NONE hi caadi Norter ctermfg = 16 ctermbg = NONE cterm = NONE hi Gaara ctermfg = Yellow ctermbg = NONE hi Comment ctermfg = DarkYellow ctermbg = NONE hi Constant ctermfg = Blue ctermbg NONE hi LineNr ctermfg = DarkGrey ctermbg = NONE hi PreProc ctermfg = Green ctermbg = NONE hi Statement ctermfg = Cyan ctermbg = NONE hi Type ctermfg = Cyan ctermbg = NONE hi Error ctermfg = Red ctermbg Magenta MONEgifier CODmifier = MAYA aqoonsiga hi SpecialKey ctermfg = Cyan ctermbg = NONE hi NonText ctermfg = Blue ctermbg = NONE hi Directory ctermfg = Blue ctermbg = NONE hi MoreMsg ctermfg = Green ctermbg = NONE hi Red Title ctermfg = Magenta ctermbg = NONE ctermter = = Buluug ctermbg = MAYA
Taas oo ka saareysa asalka madow (ctermbg = MAYA) laga bilaabo dhammaan ereyada muhiimka ah ee ku jira luuqadda barnaamijka iyo bogagga aan qoraalka ku qorneyn (Qoraal la'aan).
Xuduudahaani waxay ku saleysan yihiin nidaamka midabka ugu sarreysa, Waxaan si fudud wax uga beddelay sifo ctermbg in midabka asalka loo dhigo midna. Haddii aad doorato qorshe midab kale waa inaad ka heshaa qaabkeeda asalka ah, nuqul oo ku dheji qaabeyntaada adoo dejinaya ctermbg a WAXBA
Wax ka beddelka kale
Anigu shakhsiyan waxaan jecelahay inaan ku muujiyo khadka hadda jira muuqaalka soo socda:
hi CursorLine guifg = NONE guibg = # 121212 gui = NONE ctermfg = NONE ctermbg = NONE cterm = BOLD hi CursorColumn guifg = NO
Kadib markaad codsato dhammaan isbeddeladan, Vim waxay u egtahay sidan:
Tani waxay ahayd maqaalkeygii ugu horreeyay ee wax ku biiriya Laga soo bilaabo Linux, Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay waxtar. Ma ogeyd qaabeynta qaabkan ee Vim? Habayn noocee ah ayaad samaysay? Faallo ka bax!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Dejinta ugu dambeysa ee Vim
Anigu waxaan ka mid ahaa kuwa neceb VIM, waxaan idhi waxay ahayd tifaftiraha qoraalka ee Pulpos .. laakiin in muddo ah hadda waxaan u isticmaalaa in ka badan Nano (tifaftiraha kale, ma aha eNano ka socota beesheena) xDD
Way igu dhacday xoogaa adiga oo kale ah, markii aan arkay in Vim uu xoogaa ka dhib yar yahay, waxaan adeegsaday Nano, illaa aan dadaal u galay sidii aan ula qabsan lahaa Vim oo waxay ii noqotay tafatirehayga caadiga ah. Farxad!
Taasi waa sax .. habka, waa wax lagu farxo in aan halkaan ku soo gaaro .. Soo dhawow!
Mahadsanid, waxaan rajeynayaa inaan wax ku biirin karo maqaalo tayo leh. Farxad!
Had iyo jeer waxaan isticmaali jiray Vi, halkaas ayaan wax ka beddelay qoraalladayda 'COBOL' (shaqadaydii ugu horreysay ee 17 jir) xD Weligay mid kale uma isticmaalin caajisnimo laakiin si fiican bay ii dejisay, waxayna leeyihiin toobiyeyaal aan caadi ahayn!
Hagaag, inta aan ogahay, labaduba waa Nanos iyaguna waa Tifaftirayaal, markaa wali ma garanayo midka aad isticmaasho ... ama waxaa laga yaabaa inaad labadoodaba isticmaasho. xD
GNU Nano waa barnaamij softiweer ah, halka nano ku dhex jirta beeshani ay tahay magac qof.
Jooji isticmaalka magacayga xubinta taranka, waxaa ku baxday xD
ENano la Windows XP .. WTF?
Waxaan ku jiray uni uu
Angel Isaac Pizano dijo
Cudur daar! Waxaad u baxday dhinaca mugdiga! XD
Iyo wixii ku saabsan boostada ... Waxaan u maleynayaa inaan barto isticmaalka Vim o_o
Jawaab Ángel Isaac Pizano
Waxaan ku jiraa labada Windows Vista iyo Debian Wheezy, markaa ha ka caban hadaan wax kula faallo Google Chrome 30 (runti waa Chromium 30) Vista.
Waan ogahay dareenkaas, bro.
Sabab ahaan, markaan kahadlayo GNU Nano, waxaan qoraa GNU Nano (kaliya ma ahan nano sababtoo ah madmadowga ay soo saareen magacaaga).
Kaliya kuwa u qalma ayaa filan kara Vim (oo aanan anigu ku jirin).
Isagu waa uu murugsan yahay, laakiin waa iska cadahay inuu yahay tifaftire ka fiican, qof walbaa isaga ayuu ka hadlayaa.
Waxaan in muddo ah isticmaalayay VIM, waa tan jaangooyooyinkeyga aan ku isticmaalo Ubuntu iyo OSX
Ma fahmin vim ... waan isku dayay laakiin markasta waxaan ku noqdaa nano caado la'aanta aan u malaynayo laakiin way igu kacaysaa 🙁
I rumee, markaad la qabsato waxay noqoneysaa lagama maarmaan. Taas oo ah inaad nuqul ka sameyn karto / dhaqaajin karto / beddeli karto qoraalka, tirtiri karto ama aad wax ka beddeli karto qoraalka safka ... si kastaba ha noqotee, marka aadan haysan muuqaal muuqaal ah oo VIM ah waa wax weyn ... xitaa haddii la adeegsanayo qaab muuqaal ah waa wax weyn 😀
Markaan jawi jirin waxa ugu fiican waa MC (taliyaha habeenbadhka)
Waxaas oo dhan ayaan ku sameeyaa Geany. Ma arko sababta aan u barto waxyaabo qalafsan. Waxaan marwalba ka fikiri jiray inay tahay barnaamijka softiweerka ah ee ay tahay inuu la jaanqaado bina aadamka oo uusan ahayn kan kale. Laakiin haye, adduunku waa xor ... xilligan.
Ka waran? .. ..Waa inaan ku diidanahay ra'yigaaga .. .. aniga ilama muuqato cadaalad inaad u maleyneyso qaab guud in softiweer gaar ah uusan ku habbooneyn bini'aadamka .. ..ma fududaan maxaa yeelay baahida iyo aragtida midkasta ... way kaladuwan tahay, mararka qaarna waxbadan ...
Qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ayaa ah tifaftiraha nano, anigu ma taageersani xitaa haddii waxyar laga beddelo .. ..Qaar sida geany, ninjaIDE, eclipse .. midna ama kan kale ayaan doorbidayaa iyadoo kuxiran kiiska .. .. emacs kale , Waxaan arkay ..
Waxyaabaha umuuqda inay adagtahay in la barto, in kasta oo aysan had iyo jeer ahayn, waxay u muuqdaan inay leeyihiin faa iidooyinkooda .. ..Qaar tiro badan oo xog ah oo ku jirta feyl, runtiina waxaan ula jeedaa (TB) aad u sarreeya .. Tifatirayaasha qaarkood xittaa kuuma oggolaan doonaan inaad furto. .. iyo Vi kaliya ma furi karin ... laakiin waxaan ku sameyn karaa maarayn adag adoo adeegsanaya tibaaxaha caadiga ah ...
Kaliya aragtidayda .. ..Waxaan rajaynayaa inaad fahantay ..
Aan aragno, ku dhowaad dhammaan tifaftirayaasha waxaan u adeegsaday inaad ku keydisato Ctrl + S (Badbaadi) oo aad la baxdo Ctrl + Q (Jooji). Oo waxaad ku dhaqaaqeysaa furayaasha fallaarta ee habboon ee leh fallaadho yar. Ii sheeg sidee loogu sameeyaa vim? 😉
Waan fahmay aragtidaada, isdaji.
Em .. ..mil .. .. si aad udhaqaajiso waxaad kuwada samayn kartaa labada fallaarba ee yar .. sida furayaasha 'HJKL' .. caadi ahaan vi-like ..
Si aad u keydiso ugana baxdo ': wq' .. 😉
Sii fursad aad ku barato sida loo isticmaalo vim .. ..waxayse isku daydaa hal toddobaad .. kaliya adoo isticmaalaya vim .. ..markaad barato qalabka, xawaaraha ay bixiso waa mid aad u badan ..
Waa inaan ku tijaabiyaa maskax furan, maxaa yeelay runtu waxay tahay in waqtiyadii aan ku baryay inuu sameeyo xoogaa sixiddiisa ah waxay iga dhigeysaa mid quusasho leh, waxaanan ku dhammeeyaa isticmaalka nano.
Waan ku faraxsanahay emacs
Taas waan kugu taageersanahay, maadaama GNU Emacs ficil ahaan yahay mindi ciidan Swiss ah markay tahay sixitaanka qoraalada iyo qoraallada. Haddii aad rabto inaad google ama maamusho boostadaada. Emacs oo leh dhowr fiilooyin ayaa si fiican u qaban kara.
Waan ku faraxsanahay monodevelop
IN LA XIRO
Wenas .. .. marka horeba, waa weyn tahay inaad go'aansatay inaad wax ku biiriso .. iyo xitaa intaas ka sii badan oo qoraal noocaas ah .. ..waad aad u mahadsantahay !! ..
Waxaan raadinayay wax la mid ah muddo dheer .. si aan u bilaabo isticmaalka Vim marar badan .. ..in kastoo had iyo jeer aan u isticmaali jiray Vi .. .. mashaariic waaweyn, waxa ugu habboon ayaa ah in la helo qaab wanaagsan oo Vim la dego . .. markale, mahadsanid .. ..waanan aqrinaynaa .. 😉
Waa inaad rakibtaa Vim kahor intaadan sameyn go'aan indho la'aan ah. Hada waxaan adeegsanayaa GNU Nano iyo GNU Emacs.
Dejintu waa weyn tahay Alejandro… Si kastaba ha noqotee, qorshooyinka midabku waa kuwo cabsi badan. Ma aqaano haddii aad si lama filaan ah u ogtahay halka aad ka heli karto xeelado midabbo badan oo soo jiidasho leh. Anigu shaqsiyan runtii waan jeclahay qorshaha Twilight ee Textmate.
Haddii aadan jeclayn mid ka mid ah qorshayaasha midabka ee ku soo dhaca keydka, waxaad isku dayi kartaa inaad rakibto wax kale, ama aad wax ka beddesho midabada sida aad u jeceshahay adoo wax ka beddelaya qiimaha ctermfg.
hi NonText ctermfg = 18 ctermbg = NONE cterm = MAYA
hi Ctermfg caadi ah = 16 ctermbg = NONE cterm = MAYA
hi Gaarka ah ctermfg = Jaale ctermbg = MAYA
hi Faallo ctermfg = DarkYellow ctermbg = MAYA
hi Constant ctermfg = Buluug ctermbg = MAYA
hi Number ctermfg = Jaale ctermbg = MAYA
hi LineNr ctermfg = DarkGrey ctermbg = MAYA
hi PreProc ctermfg = Green ctermbg = MAYA
hi Bayaanka ctermfg = Cyan ctermbg = MAYA
hi Nooca ctermfg = Cyan ctermbg = MAYA
hi Error ctermfg = Casaan ctermbg = MAYA
hi Aqoonsi ctermfg = Magenta ctermbg = MAYA
hi SpecialKey ctermfg = Cyan ctermbg = MAYA
hi NonText ctermfg = Buluug ctermbg = MAYA
hi Tusaha ctermfg = Buluug ctermbg = MAGACA
hi MoreMsg ctermfg = Green ctermbg = MAYA
hi Title ctermfg = Magenta ctermbg = MAGACA
hi WarningMsg ctermfg = Casaan ctermbg = MAYA
hi DiffDelete ctermfg = Buluug ctermbg = MAYA
Ender fletcher dijo
Sidee tahay. maqaal wanaagsan. Way fiicnaan laheyd in wax lagu dhajiyo sida looga faa'iideysto qalabkan. Isticmaalayaashaas oo aan khabiir ku ahayn sida aniga 🙂
Jawaab Ender Fletcher
Aad u xiiso badan oo mahadnaq leh, waxay hagaajineysaa isticmaalka vim badan, laakiin sidee ayaad u dhigeysaa lambarrada xariiqyada? Waa waxa kaliya ee aanan awoodin inaan gaaro.
Ku jawaab juukanka
: Lambarka la dhigo
Soo gaabin ': set nu' .. ..iyo inaad ka saarto ': deji nonu' 😉
Waxaan u isticmaalaa tan:
: ha dhigin hoggaamiye la jaan qaada laststatus = 2 showcmd nambarka muujinta
Iyo si loo muujiyo khadka hadda jira ee aad u baahan tahay: deji cursorline.
Waan ilaaway, salaan.
Vim, hubka ugu fiican ee isticmaalaha Linux & Unix. Waxa ugu fiican oo dhan, waad astaysto vim, taydu waa C / C ++ IDE, NERDTree.
Aniga oo aan ahayn khabiir adeegsade ah isla markaana aan ka helin dhammaan cabitaannada xumaanta, aad ayaan ula qabsaday oo waxaan u adeegsaday tifaftiraha guud. Waxaan u maleynayaa sida ugu wanaagsan ee loola qabsan karo, maadaama ay quus ku imaan karto marka hore, waa in la sameeyo casharka la socda barnaamijka (isticmaal amarka "vimtutor"). Markaa waan sameeyay oo way i caawisay. Inta aad akhrinaysid casharrada waxaad u adeegsanaysaa vim isla waqtigaas.
Waad salaaman tihiin bulshada, waxaan isticmaalaa muuqaal iyo sida inbadan oo idinka mid ah waxaan u arkaa inay tahay aalad aan looga maarmin shaqadayda. Waxaan doonayay inaan soo bandhigo caano faa iido badan leh oo aan wax kaga qabanayo rakibaadda qalabyada. Qalabka waxaa loo yaqaan "pathogen". Qalabkani wuxuu maareeyaa wadiiqooyinka noocyada kala duwan, isagoo ka dhigaya rakibiddooda iyo rakibiddooda mid aad u fudud. Haddii aad isticmaasho vim, waa inaad isticmaashaa qalabkan. Tilmaan kale: bogga vimbits.com waxaa ku yaal khariidado iyo dejinno aad u xiiso badan. Iyo kuwa isticmaala Python, waxaan kugula talinayaa qalabka loo yaqaan 'Python-mode plugin'. Waxaan rajeynayaa inay u adeegto sida ay aniga ila tahay.
Aynu isticmaalno Linux.
Weli ma aanan isticmaalin Vim, waxay iga dhigeysaa mid aad u xiiso badan. Waa inaan isku dayaa, laakiin hadda!
Wax badan ayaan ku raacsanahay halkan.
Waxaan xasuustaa in maalmihii uhoreeyay ee aan isku dayay inaan isticmaalo vim mar walbana aan iskaga tago, maxaa yeelay waxay umuuqatay mid adag in la isticmaalo, ilaa maalin maalmaha ka mid ah waxaan bilaabay inaan dareemo sida oo aan fahmi karo wax yar sida ay u shaqeyso.
Halkaas, waxay noqotay tifaftiraha qoraalka aan ugu jeclahay, markaan ku khasbanaado inaan si dhakhso leh ugu saxo konsol-ka.
By habka, maqaal wanaagsan.
Mahadsanid, waan ku faraxsanahay inay ahayd maqaal xiiso badan.
... boostada waa mid aad ufiican, runtii waan jeclahay vim waxaan u adeegsadaa barnaamijka maxaa yeelay si aan u hagaajiyo qaansoleyda marwalba dhibaatooyin ayaa iga haystay laakiin waa arin ku celcelin ah. Qoraalkan laga bilaabo maanta ma ahan mid waqtigiisu dhacay.
Sidee ku saabsan, Waxaan haystaa dhibaatada ah in xiriirkan uu jabay, qof ayaa ii sheegi kara midka hadda shaqeynaya. Xilligan la joogo waxaan tijaabinayaa qaar aad adigu ku taliso laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado aragtidaada… Mahadsanid !!
isha ~ / .vim_runtime / vimrcs / plugins_config.vim
Waxaan dhibaato ku qabay feylka faylka yankring markii aan isku dayayay inaan abuuro feylka 'yankring_history_v2.txt. Fikrad kasta oo aad i siin karto sida aan u xaliyo ...
Waan jeclahay bartaada.
Kaliya waxaan rabaa inaan kuu sheego inaad leedahay xiriiriyeyaasha sawirrada jabay.
Sida loo: Looga Hortago Ogeysiisyada Xfce ee Lagu Tusayo Miisaaniyadaha Kale